एन्टिमेटर के हो, यसले कसरी काम गर्दछ र यसको लागि के हो? नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब तपाईं यो शब्द सुन्नुहुन्छ एन्टिमेटर यो कुनै चलचित्रको विशिष्ट जस्तो देखिन्छ। जे होस्, यो केहि वास्तविक हो र हामी यसलाई हाम्रो शरीरमा उत्सर्जन गर्दछौं। एन्टिमेटर विज्ञानको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ किनकि यसले हामीलाई ब्रह्माण्डका थुप्रै पक्षहरू, यसको गठन र विकास बुझ्न मदत गर्दछ। थप रूपमा, यसले वास्तविकतामा हुने धेरै घटनाहरूको व्याख्या गर्दछ।
के तपाई एन्टिमेटर के हो भनेर जान्न चाहानुहुन्छ र किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? यहाँ हामी तपाईलाई सबै कुरा व्याख्या गर्दछौं।
1 एन्टिमेटर के हो?
2 Dirac को समीकरण
3 एन्टिमेटर कहाँ पाइन्छ?
4 यो के हो?
एन्टिमेटर के हो?
एन्टिमेटर एउटा ती विशाल समीकरणहरूबाट उत्पन्न हुन्छ जुन भाषा छ जुन केवल महान भौतिक विज्ञ र गणितज्ञहरूले व्याख्या गर्न सक्षम छन्। यी समीकरणहरू केहि गलत जस्तो देखिन्छ र त्यो, सामान्यतया, धेरै समीकरणहरू पछि, यो सामान्य छ त्यहाँ केही त्रुटि रहेको छ। यद्यपि यो पूर्ण रूपमा सहि छ र एन्टिमेटर वास्तविक छ।
यो एन्टिपार्टिकल्स के रूप मा चिनिन्छ के बनेको पदार्थ हो। यी कणहरू हामी जान्दछौं जस्तो छ तर पूर्ण विपरित बिजुली चार्जसँग। उदाहरण को लागी, एक इलेक्ट्रोनको एन्टिपार्टिकल जसको चार्ज नकारात्मक हो पोसिटरन हो। यो समान संरचनाको साथ एक समान तत्व हो, तर सकारात्मक चार्जको साथ। यो सरल छ र जो कोही यसलाई अधिक जटिल बनाउन चाहन्छ गलत छ।
यी कण र antipartical पदार्थ जोडी मा जान। जब दुई आपसमा टकराउँछन्, तिनीहरू एक अर्कालाई नष्ट गर्छन् र पूर्ण रूपमा हराउँछन्। यस टक्करको परिणाम अन्तर्गत, प्रकाशको फ्ल्यास गठन हुन्छ। कणहरू जुन चार्जहरू हुँदैन, जस्तै न्यूट्रिनोहरू, तिनीहरू आफैंलाई एन्टिपाण्टिकल मानिन्छ।
त्यहाँ केही थियरीहरु छन् कि ती कणहरु माजोराना को नाम मा सोच्न को लागी र यो पछ्याउँदछ कि कालो पदार्थ कणहरु पनि मजरोना कणहरु हुन सक्छ, त्यो भन्नुको अर्थ तिनीहरू आफैं नै एन्टिपार्टिकल र कण हो एकै समयमा।
Dirac को समीकरण
हामीले छलफल गरिसक्यौं, एन्टिमेटर गणितीय अध्ययन र लामो भौतिक समीकरणबाट उत्पन्न हुन्छ। भौतिकशास्त्री पॉल डाइराकले १ 1930 XNUMX० मा यी सबैको अध्ययन गरे। उनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शारीरिक प्रवाहहरूलाई एकमा जोड्न खोजे: विशेष सापेक्षता र क्वान्टम मेकानिक्स। एकल सैद्धान्तिक ढाँचामा एकताबद्ध यी दुई धारहरूले ब्रह्माण्डको समझलाई ठूलो सहायता गर्न सक्दछन्।
आज हामी यसलाई डियाराक समीकरणका रूपमा चिन्छौं। यो एकदम सरल इक्वेसन हो, तर एक हो कि त्यसबेला सबै वैज्ञानिकहरु लाई पिरोले। यो समीकरणले यस्तो भविष्यवाणी गर्‍यो जुन असम्भव देखिन्छ, कणहरू नकारात्मक उर्जाको साथ। डायक्रको समीकरणहरूले भने कि कणहरूमा आराम भन्दा कम ऊर्जा हुन सक्छ। त्यो हो, तिनीहरूसँग थोरै उर्जा हुनसक्थ्यो जब उनीहरू पूर्ण रूपमा केहि गर्दैनन्। यो कथन भौतिकशास्त्रीहरु बुझ्न को लागी अधिक गाह्रो थियो। यदि तपाईं आफैले आफैलाई केहि गरिरहनु भएको छैन भने, तपाईं केहि कम नगरी कसरी कम ऊर्जा पाउन सक्नुहुन्छ?
यसबाट यो पत्ता लगाउन सम्भव भयो कि कणहरूमा नकारात्मक उर्जा थियो। यी सबैले वास्तविकतालाई ट्रिगर गर्‍यो जुन त्यहाँ कणहरूको समुन्द्र छ जुन नकारात्मक उर्जा हो र जुन भौतिक विज्ञानले पत्ता लगाएको थिएन। जब एक सामान्य कण तल्लो ऊर्जाको स्तरबाट माथिल्लोमा उफ्रिन्छ, यो तल्लो ऊर्जा स्तरमा खालि छोड्छ जुनबाट आएको हो। अब, यदि कणसँग नकारात्मक चार्ज छ भने, प्वालमा नकारात्मक चार्ज हुनसक्दछ वा के समान हो, एक सकरात्मक चार्ज, त्यो हो, पोसिटरन। एन्टिपार्टिकलको अवधारणा यसरी जन्मियो।
एन्टिमेटर कहाँ पाइन्छ?
पत्ता लगाईएको पहिलो एन्टिमेटर कणहरू ती हुन् क्लाउड चेम्बर प्रयोग गर्ने लौकिक किरणहरूबाट। यी क्यामेराहरू कणहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू ग्यास उत्सर्जन गर्छन् जुन कणहरू बितिसकेपछि ionized, ताकि तपाईं तिनीहरूको मार्ग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वैज्ञानिक कार्ल डी। एन्डरसन एक चुम्बकीय क्षेत्र को उपयोग गर्न मा सक्षम थियो कि, जब कण कक्षको माध्यमबाट जान्छ, मार्ग यसको विघुतीय चार्जको लागि बnd्ग हुन्छ। यस तरिकाले यो हासिल भयो कि कण एक छेउमा जान्छ र एन्टिपार्टिकल अर्कोमा जान्छ।
पछि, एन्टिप्रोटनहरू र एन्टिन्युट्रनहरू पत्ता लगाइए र त्यसबेलादेखि आविष्कारहरू बढी र ठूला भए। एन्टिमेटर अधिक र अधिक परिचित हुँदै गइरहेको छ। ब्रह्माण्डको किरणका अंश भएका एन्टिपायटिकहरूद्वारा हाम्रो ग्रह निरन्तर बमबारी भइरहेको छ। हाम्रो सबैभन्दा नजिकको कुरा भनेको हामीलाई असर गर्ने कुरा हो।
हामी भन्न सक्दछौं कि हामी आफैंको शरीरको संरचनाको कारण एन्टिमेटर उत्सर्जन गर्दछौं। उदाहरण को लागी, यदि हामी एक केरा खायौं, पोटेशियम -40 को क्षयको कारण, प्रत्येक 75 XNUMX मिनेटमा पोसिटरन गठन गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि यदि हाम्रो शरीरमा, हामी पोटेशियम -40० फेला पार्दछौं, यो यस्तो हुनेछ कि हामी आफैले एन्टिपार्टिकल्सको एक स्रोत हो।
तपाई पक्कै भन्नुहुनेछ कि त्यहाँ एन्टिमेटर छ भनेर थाहा पाएर के हुन्छ। ठिकै छ, उनलाई धन्यबाद, हामीले चिकित्साको क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेका छौ। उदाहरण को लागी, यो व्यापक रूपमा पोसिटरन उत्सर्जन टोमोग्राफीमा प्रयोग गरिन्छ। यी कणहरू उच्च रिजोलुसनमा मानव शरीरको केही छविहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुन प्रयोग गरिन्छ। यी छविहरू निरीक्षण गर्न धेरै उपयोगी छन् यदि हामीसँग ट्यूमर छ कि विस्तार भइरहेको छ वा यसको विकासको डिग्री। क्यान्सरको उपचारको लागि एन्टिप्रोटन्सको प्रयोग पनि अध्ययन गरिएको छ।
भविष्यमा, antimatter ऊर्जा उत्पादन मा एक आशाजनक तत्व को रूप मा सेवा गर्न सक्छ। जब पदार्थ र एन्टिमेटर नष्ट हुन्छन्, उनिहरु को प्रकाश को रूप मा एक राम्रो फार्म छोड्न। एक ग्राम एन्टिमेटरले मात्र आणविक बमको बराबर उर्जा निकाल्छ। यो पूर्ण रूपमा अद्भुत छ।
उर्जाका लागि एन्टिमेटरको शोषणको साथ समस्या आज यसको भण्डारण हो। यो यस्तो चीज हो जुन हामी समाधान गर्न धेरै टाढा छौं। प्रत्येक ग्राम एन्टिमेटर यसको लागि लगभग २,25.000,००० खरब किलोवाट घण्टा ऊर्जा चाहिन्छ।
यसले हामी किन अस्तित्वमा छौं भनेर पनि वर्णन गर्दछ। सुरुमा, अनुसार बिग बैंग थ्योरी, दुबै पदार्थ र एन्टिमेटरको उत्पत्ति कुल सममेट्रीको ढाँचामा भएको हुनुपर्दछ। यदि यो भएको भए, हामी पहिले नै हराइसकेका हुन्छौं। तसर्थ, यो आवश्यक छ कि प्रत्येक एन्टिमेटरको लागि कम्तिमा १ कण पदार्थको हुनु पर्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीले एन्टिमेटरको बारेमा तपाईंको शंका स्पष्ट गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » एन्टिमेटर